Vonjeo Ireo Toerana Lova Tandindonin-doza Ao Syria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2012 23:27 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Español, 한국어, Ελληνικά, عربي, Svenska, Nederlands, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Filipino, English
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Hetsi-panoherana ao Syria 2011/12.
Hatramin'ny 30 Marsta 2012, nanao antso ny UNESCO ho an'izao tontolo izao mba hamonjena ireo rakitra manan-tantara ao Syria. Irina Bokova, hoy ny nambaran'ny talen'ny UNESCO :
Ny tanànan'i Aleppo, manokana, dia tafiditra teo anelanelan'ny fifampitifiran'ny mpanohitra sy ny tafi-panjakana. Io no nahatonga indray ny Firenena Mikambana sy ny sampany, ny Kaomitim-Bakoka Erantany hampaneno anjomara fanairana.
Mba ho firaketana ireo fahapotehana manjo ny tantaran'i Syria, nisy pejy Facebook iray sy kaonty YouTube noforonina eo ambanin'ny lohateny hoe ‘Ny lova arkeolojika Siriana tandindonin-doza’, miaraka aminà fampahafantarana amin'ny teny Arabo, Frantsay, Anglisy ary Espaniola.
Ao anatin'ny iray amin'ireo taratasy ireo dia azontsika vakiana ity kabarim-piarovana ity :
Ity no Bab al Turkman tao Homs :
Ary ity ny Tilikambo malazan'i Aleppo , taloha sy taoriana :
Ny ‘souk’ tranainy ao Midan dia nizaka ihany koa ny faharavàna :
Misy fanangonan-tsonia iray hiarovana ireo lova ara-kolontsain'i Syria koa azo jerena ao amin'ny Avaaz.